မည်သူမဆိုမိနစ်အတွင်းဒီဂစ်တာ Play မှသင်ယူနိုင်
သမိုင်း & ယဉ်ကျေးမှု တီထွင်မှု
အလေ့အကျင့်, အလေ့အကျင့်, အလေ့အကျင့်။ သင်သည်တစုံတခုကိုမှာကောင်းသောဖြစ်လာချင်လျှင်, အဘယ်သူမျှထိုသုံးစကားများပတ်ပတ်လည်လာပြီရှိပါတယ်။ ဂီတသမား, သင်တန်း, အားလုံးလည်းကောင်းစွာသင်တို့သိကြ၏။ သုတေသနသူတို့အထက်တန်းလွှာအဆိုတော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်မီလေ့ကျင့်တယောနှင့်စန္ဒရားပညာရှင်များမှာလူကြိုက်များပုံမှန်အားဖြင့် 10000 နာရီပျမ်းမျှအတွက်ထားကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါဂိမ်းလည်းကစားသမားလျင်မြန်စွာစည်းချက်အချိန်ကိုက်မှနေသားတကျရဖို့ခွင့်ပြုပါ, အပြင်ဗုံ, ဘေ့စနှင့်အခြားတူရိယာကစားရန်လိုအပ်သော Dexter အချို့ကိုအဖြစ်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
သို့သော်အမှန်တကယ်ကစားခြင်းဆိုမှကျော်ခုန်အောင် ဂစ်တာ , လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ လက်ချောင်း positioning ကိုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Pick နည်းစနစ်များကဲ့သို့အမှုအရာများ၏အသေးစိတ်ပရိယာယ်ကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်သောအလေ့အကျင့်နာရီပေါ်မှာနာရီမျှအစားထိုးရိုးရှင်းစွာပဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါသင်ယူမှုကွေးမကြာခဏအကာအရံ, တစ်ဦးဦးဆောင်ဂစ်တာအမှတ်တံဆိပ်သည်နှင့်အညီ, အရင်ကဆိုရင်၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်အတွင်းဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်အောင်မတ်စောက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
နည်းပညာအ-တိုးမြှင့်ဘယ်မှာရဲ့ တူရိယာ ဖြစ်သော MI ဂစ်တာအဖြစ်လာပါတယ်။ ဂစ်တာမည်သူမဆိုမျှသာမိနစ်ကစားရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကိုဆောက်ခြင်း, စည်းချက်ဂစ်တာတစ်ဦးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအိပ်မက်ရဲ့အရာဖွစျသညျ။ ဂစ်တာသူရဲကောင်းဆင်တူက fretboard တစ်လျှောက်ထိတွေ့နိုင်သောအီလက်ထရောနစ် interface ကိုတပ်ဆင်ထားပေမယ့် Chord ၏ကျယ်ပြန့ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထိပ်မှာဂစ်တာရဲ့အင်အားသုံး-အထိခိုက်မခံညှို့လည်းအသုံးပြုသူများကိုအများကြီးအမှန်တကယ်ဂစ်တာလိုပဲအသံကျယ်၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူ Chord ထုတ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။
မူလပေမယ့က်ဘ်ဆိုက် Indiegogo အပေါ်တစ်ဦးပေမယ့စီမံကိန်းကိုအဖြစ်ဖြန့်ချိခြင်း, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး $ 412.286 စုစုပေါင်းထမြောက်တော်မူ။
နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်နှောင်းပိုင်းတွင် 2017 သည်အထိသင်္ဘောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစောပိုင်းလက်ပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်ရှေ့ပြေးပုံစံ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောခဲ့ကြပြီ။ က Wired မဂ္ဂဇင်းမှာတစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်သူအဖြစ်ဂစ်တာချီးကျူးထောပနာ "လုံးဝပျော်စရာနဲ့သုံးစွဲဖို့ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့။ " The Next Web အဖြစ်ဖော်ပြ, အလားတူစိတ်ဓါတ်များသံယောင် "သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအမြန်ယိုအစည်းအဝေးများအဘို့ကြီးသော, ဒါမှမဟုတ်ပထမဦးဆုံး strumming သောအဘို့ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ကသုံးနိုင်သည်။ "
ဘရိုင်ယန်သည်ဝါသနာရှင်ဆန်ဖရန်စစ္စကို-based startup ကို Magic တူရိယာ၏တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူအနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုနှင့်တကွ, ဂစ်တာသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတစ်ခုလုံးကိုနွေရာသီဖြုန်းပြီးနောက်စိတ်ကူးအတူတက်ရောက်လေ၏။ ဤသည်မှာမိမိဂီတလေ့ကျင့်ရေးမှတဆင့်ကလေးတစ်ဦးအပေါငျးတို့လမ်းအဖြစ်စန္ဒရားတီးခတ်ဘဲလျက်ရှိနေသော်လည်း အဆိုပါ Juilliard ကျောင်း , ကမ္ဘာ့အများဆုံးဂုဏ်သတင်းကြီးသောဂီတ conservatories တဦး။
"ငါ [ဂစ်တာသင်ယူဖို့] အရာရာတိုင်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ YouTube ဗီဒီယို , သင်ယူခြင်းဂစ်တာ, gimmicks - သင်ကအမည်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒီအရာကိုသင်အချိန်အများကြီးယူသောအရာအထူးသဖြင့်တူရိယာ, များအတွက်မော်တာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကြွက်သားမှတ်ဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရန်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက် twister ကစားခြင်းနဲ့တူခံစားခဲ့ရအချိန်တစ်ဦးကအများကြီး။ "
အဆိုပါစည်းချက်ဂစ်တာအကြောင်းကိုသိရန်ပထမဦးဆုံးအရာကအစဉ်အလာ string ကိုတူရိယာမှသာအပေါ်ယံအကြံအစည်ဖြင့်သမုတ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအ sampler devices များကဲ့သို့ပင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးစီးရီးမှကန့်သတ်ထားပါသည် Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ စပီကာမှတဆင့် play သော။
သငျသညျတူ-ons တွေကို, ဆွဲ-off, vibrato, string ကိုကွေး, ဆလိုက်များနှင့်အသံပုံဖော်နှင့်ကဂုဏ်ထူးပေးဖို့အသုံးပြုကြသည်အခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။
"တမင်တကာ ရည်ရွယ်. ပြုလုပ်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်လုံးဝမအတွေ့အကြုံနှင့်အတူငါကဲ့သို့သောလူများရှေ့သို့ရည်ရွယ်ရုံမဟုတ်ဘဲဂစ်တာကစားသမားထက်ကစားလိုသူများအတွက်ရဲ့" ဝါသနာရှင်ကပြောသည်။ "ကဂစ်တာနဲ့တူဘာမျှမပြုမူ, ဒါပေမယ့်သူကတုန်ခါညှို့၏ရူပဗေဒအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်မပေးမယ့်ကတည်းကသူကဂီတကိုတီးခတ်ဖို့နေဆဲဤမျှလောက်လွယ်ကူဒါ။ "
အဆိုပါ MI ဂစ်တာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပေါ့ပါးခြင်းနှင့်ဝန်ခံရမည်အများကြီးလျော့နည်းစိုးရွံ့သော်လည်းငါ့အပေါင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း Cradling ကတစ်ကယ့်ဂစ်တာ၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုရှိကိုပြု၏။ အထက်တန်းကျောင်းတစ်စန္ဒရားလူတန်းစားထက်ကျော်လွန်နေတဲ့ဂီတနောက်ခံအများကြီးရှိခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်လည်းဒါဟာနေဆဲညှို့အပြင်ယင်း၏ခလုတ်နှင့်အတူယုံကြည်မှုတစ်ခုလေကြောင်းကစားသမားချေးငှားသည် - ကဘယ်လို, နေ့တိုင်းကျွန်တော်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ်မှာရှိသမျှစာနယ်ဇင်းခလုတ်မနိုင်စဉ်းစား ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူမည်လော
ဒါဟာအစအမျိုးမျိုးသောသီချင်းတွေကိုဖို့သီချင်းစာသားနှင့် Chord ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် iOS app ကိုနှင့်တကွကြွလာ။ ဂစ်တာနှင့်အတူကတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်ကဂရုတစိုက်သင်တစ်ဦးချင်းစီစိတျဝငျစား play အဖြစ်ထွက် scrolling, ကာရာအိုကေ-စတိုင်တလျှောက်တွင်သင်သည်ပဲ့ပြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့ကြိုးခလုတ်ကိုနှိပ်သို့မဟုတ်အလွန်များနေတဲ့စည်းချက် hesitating အားဖြင့်ဖြစ်စေ, တစ်ဦး Green Day သီချင်းမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးစုံတွဲကြိုးစားမှု flub ရန်ခဲယဉ်းပါဘူး။ ဂီတ - ဒါပေမယ့်ပတ်ပတ်လည်ကိုသွားတတိယအသုံးပြုပုံကြောင့် lo သည်အထိအတူတူသူတို့ကိုတွဲတစ်နည်းနည်းအရှိန်ကောက်နဲ့ကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
နည်းပညာစမ်းရသေးသူဂျိုးဂိုး, ဂစ်တာ Player ကိုမဂ္ဂဇင်းများအတွက်ဂစ်တာကစားသမား, ဂီတ software ကို developer ဟောင်းအယ်ဒီတာ, သူမည်သူမဆိုကစားနိုင်တဲ့များအတွက်ဂစ်တာ၏အယူအဆ likes နေချိန်မှာသူကဖြစ်မျှော်လင့်မထားဘူးသူကပြောပါတယ် ရှည်လျားသောသူတို့ရဲ့အခွန်အခအတွက်ထားပြီးပြီသောသူတို့သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
"ဒီဂစ်တာအသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်ရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "သင်၏ယာဉ် honing သို့ဝင်တဲ့အချို့အလုပ်ကျင့်ဝတ်ရှိသောကြောင့်, သူတို့ကတစ်စုံတစ်ဦးကိုလိမ်ပြီးဖြတ်လမ်းအစားနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏လုံးဝအသည်းအသန်တစ်ခုခုသို့အချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံယူမြင်သောအခါကဲ့ရဲ့နည်းနည်းခံစားရပါတယ်သဘာဝပါပဲ။ "
ဝါသနာရှင်အဆိုပါဝေဖန်မှုများမှလာရှိရာသူသူ့အဖွဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလက်ခံရရှိခဲ့သည် "အမုန်းပို့စ်များကို" ၏အထူးသဖြင့်တရစပ်, နားလည်နိုင်ပြောပါတယ်စဉ်နှင့်အညီ, သူဂစ်တာ purists ခြိမ်းခြောက်ခံစားရရန်အဘို့အဆိုအကြောင်းပြချက်ကိုမမွငျပါဘူး။ "ကျနော်တို့ကဂစ်တာ, အထူးသဖြင့် Express နှင့်အသံကအစားထိုးမရနေကြတယ်" ဟုဝါသနာရှင်ကပြောသည်။ "ဒါပေမဲ့သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်အခါကလေ့လာသင်ယူဖူးပါဘူးသောသူတို့အားယခုအခါလျော့နည်းအချိန်ရှိသည်ဘို့, ငါတို့သည်သင်တို့ကောက်များနှင့်ချက်ချင်းကစားပျော်မွေ့နိုင်သောအရာတစ်ခုခုရဲ့ဤနေရာတွင်ပြောနေပါတယ်။ "
သတင်းအချက်အလက်ရောင်းစျေးသတ်မှတ်နှင့်ကြိုတင်မှာယူမှုအပေါ်စည်းဝါးကျကျဂစ်တာ purchasing စိတ်ဝင်စားမည်သူမဆိုကို Magic တူရိယာ '' က်ဘ်ဆိုက်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသင်တီထွင်သူ Log in ဝင်ရန်စာအုပ် Start ခင်မှာ
တစ်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဒီဇိုင်နာဖြစ်လာခြင်း - တစ်ဦးသန်းဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကိုရောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
တီထွင်ဖန်တီးမှု & Creative အတွေးအခေါ်
အမေရိကန်သမိုင်း 10 အရေးကြီးက Black တီထွင်သူ
ခရစ် Tomlin သိ Get
Bowie ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
သင်ကပုံစကိတ်စီးခြင်းနည်းပြ Choose ခင်မှာ
အဆိုပါဖုန် Bowl ၏သမိုင်း
မာတိကာသတ်မှတ်ထားသော: Triple လမ်းဆုံ
ကျောင်းထိတ်လန့, Movies 30 ဂရိတ်သို့ပြန်သွားရန်
အဲဒါတွေက Metabolic Pathways ဂလူးကို့အတွက် ATP ထုတ်လုပ်ဘယ်နားလည်မှု
ဂန္ထဝင်ဖရန့် Capra, Movies
ဆယ်ကျော်သက် Scorpio-Pisces မတ်ေတာသညျ
ရာသီခွင်လိုက်ဖက် - မေတ္တာတော်၌တည် Capricorn
စန်တာဘာဘရာကယ်လီဖိုးနီးယား USA တွင်ပရဒိသုခုနှစ်တွင်ရေခဲပြင်
1977 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: 'နေမင်းအတွက် Duel' ၌ Watson ဟာ Best Nicklaus